Rahampitso Azia: Dow manampy ny 2% amin'ny fitohizan'ny fitrandrahana mitohy | | Robots sy famantarana forex automated
Home » Fanadihadiana fototra momba ny tsena Forex »Azia maraina: Dow manampy ny 2% amin'ny fitohizan'ny fitrandrahana mitohy
Rahampitso Azia: Dow manampy ny 2% amin'ny fitohizan'ny fitrandrahana mitohy
Ny talata dia ny US stock dia avo be dia be, nohamafisin'ny mety ho fampandrosoana ny vaksin coronavirus ary ny fampihenana ny fepetra fanakatonana any Etazonia sy manerantany. Ny orinasa Biotechnology Novavax (NVAX + 4.47%) dia nilaza ny alatsinainy teo fa nanomboka ny fitsarana ara-pitsaboana Phase 1 ny kandidà vaksin coronavirus vaovao, ka mahatonga azy io ho iray amin'ny farafahakeliny 10 ankehitriny ho sedraina amin'ny olona eran-tany.
Ny governemanta ao Japana dia nanaisotra ny fanjakana voan'ny koronavirus izay nitranga nandritra ny volana Aprily lasa teo.
Ny Dow Jones Industrial Average dia nahazo isa 530 (+ 2.2%) hatramin'ny 24995, ny S&P 500 dia nitombo 36 isa (+ 1.2%) ka 2991, raha ny 100 Nasdaq kosa nihena 24 isa (-0.3%) ka 9390.
Banks (+ 7.86%), Automobiles & Components (+ 4.7%) ary ny Capital Goods (+ 4.41%) dia mpitarika ny tsena.
Macy's (M + 18.43%), Alliance Data Systems (ADS + 17.53%), United Airlines (UAL + 16.30%), TripAdvisor (TRIP + 15.57%) ary Norvezianina Cruise (NCLH + 15.32%) no mpahazo tombony ambony. Amin'ny lafiny iray, very ny Interactive Software Software (TTWO -7.34%), Newmont Goldcorp (NEM -6.09%) ary Regeneron Pharmaceutical (REGN -4.33%) no very indrindra.
Amin'ny lafiny teknika, manodidina ny 33.6% (32.0% tamin'ny fivoriana teo aloha) ny tahiry ao amin'ny Index S&P 500 dia nivarotra mihoatra ny taha-miakatra 200 andro, ary 66.3% (65.7% tamin'ny fivoriana teo aloha) dia mihoatra ny 20 andro. mihetsika salanisa.
Ny angon-drakitra ofisialy amerikana dia naneho fa ny New Home Sales dia nitombo ny isan-taona 623,000 tamin'ny Aprily (ny fihenan'ny 480,000 unit no andrasana). Ny Index Fanamafisan'ny mpanjifa ny Kaonferansa dia nitombo hatramin'ny 86.6 tamin'ny Mey (andrasana 87.0).
Any aoriana any dia hamoaka ny tatitra ara-toekarena Beige Book ny US Federal Reserve.
Niakatra be kokoa ny tahiry eoropeana, miaraka amin'ny Index Stoxx Europe 600 dia mitombo 1.1%. Nahazo 1.0% ny alàlan'i DAX Alemanina, nitsambikina 1.5% ny CAC any Frantsa, ary tafakatra 1.2% ny tsenan'ny Anglisy.
Ny vidin'ny volamena Spot dia namoy ny $ 16 (-0.9%) ka $ 1,710 ny iray trondro nandefa ny fihenan'ny roa andro.
Ny vidin'ny solika dia nihamafy indray tamin'ny fanantenana ny fiakaran'ny fitakiana eo am-pihaviana indray. Ny fatran'ny solika amerikana WTI amerikana (Jolay) dia nitombo 3.3% hatramin'ny 34.35 $ iray gony.
Ao amin'ny forex forex, ny ICE US Dollar Index dia nihena 0.7% tamin'ny taona tamin'ny ambany ambany nandritra ny telo herinandro 99.01. Banky alàlan'ny Banky Federaly an'ny St. Louis, James Bullard, dia nilaza izy fa manantena ny hiverenan'ny toe-karena amerikana ao anatin'ny telovolana fahatelo izy, miaraka amin'ny tahan'ny tsy misy asa mihena 10% amin'ny faran'ny faran'ny taona.
Ny EUR / USD dia nandroso 0.8% hatramin'ny 1.0983. Ny biraon'ny tsatokisan'ny mpanjifa GfK any Alemanina dia nitoraka tamin'ny 18.9 tamin'ny Jona (-18.0 andrasana) tamin'ny -23.1 tamin'ny volana Mey.
Previous: Saham-bola manao hetsika lehibe indrindra aorian'ny ora maro: Tractor Supply Company, Disney, Novavax sy ny maro hafa
Next: Nahazo ny kibo ny dolara rehefa niovaova ny marika, niandry ny valintenin'i Trump tena matanjaka tamin'i Sina